Madaxweyne Farmaajo oo caawa booqday dadki ku dhaawacmay qaraxii maanta
Home /Blog/Madaxweyne Farmaajo oo caawa booqday dadki ku dhaawacmay qaraxii maanta
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa caawa booqdey dhaawacyada ku waxyeelloobay qarixii maanta ka dhacay Xaafadda Kaawo Godey ee degmada Wadajir, isla markaana sheegay in dhaawacyada daran loo sameyn doono daryeel caafimaad oo dibedda ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay wehlinayeen taliyeyaasha NISA, Boliiska iyo Asluubta ayaa marka hore booqdey dhaawacyada dadka masaakiinta ah ee argagixisadu ku qarxiyeen Xaafadda kaawo Godey ee degmada Wajir, madaxweynaha oo aad uga qiireysan dhibaatadaasi, ayaa dhaawacyada qaar xog wareystay, isla markaana u ballan qaadey in si deg deg ah wax loogu qabanayo dadkaasi.
Agaasimaha Isbitaalka Madiina Maxamed Yuusuf, ayaa sheegay in ka badan 30 qof ay dhinteen 40 ruux badanna ay dhaawacyo soo gaareen, waxa uu sheegay in gargaar loo fidiyey, kuwaas oo ay ku jireen carruur yar-yar.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marka hore u tacsiyeeyey dadkii ku dhintay weerarkii argagixisada geysatay, waxa uu ALLE uga baryayey kuwa dhaawacyada ahna in uu caafimaad siiyo, sidoo kale madaxweyne Farmaajo, ayaa sheegay in dhaawacyada halista ah loo fidin doono daryeel caafimaad oo dibedda ah.
Sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Farmaajo, ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay u midoobaan arrintaan qatarta nagu ah, waxa uu ballan-qaadey in dowladdiisa ay ku abaalmarin doonto qofkii soo sheega Gaari walxaha qarxa lagu sameynayo 100,000 (Boqol Kun oo Dollar), ciidammada Qalanka Sida ayuu sheegay in dhowaan ay qaadi doonaan tallaabooyin adag loo arrimahaasi looga jawaabayo.
Dhinaca kale Taliyaha Hey’adda Sirdoonka iyo Nabad-Sugidda Qaran Jeneraal Cabdullaahi Gaafoow Maxamuud, ayaa sheegay in hey’addu ay leedahay meel ay shacbiga kala soo xiriiri karaan sida Lambarka (991 NISA), sidoo kalena dadka Bistoolladaha dilalka ku geysta cidda xogtooda keenta lagu abaalmarin doon 10,000 oo Dollar.
Dhagayso : Wasiirka Warfaafinta maamulka Somaliland Cusmaan Saxardiid Caddaani” Wariye Coldoon Suxufi ma aha ee Waa Xagjir
Dhegayso:Musharraxa Guddoomiyaha Garissa, Gen. Bashir Xaaji Yuusuf oo Golaha 1960 waraysi siiyey